Fitsidihana an'i Sri Lanka: mila visa ve ny mpizahatany espaniola? | Travel tanteraka
Fitsidihana an'i Sri Lanka: mila visa ve ny mpizahatany espaniola?
Sri Lanka dia iray amin'ireo firenena lasa manan-danja kokoa tato anatin'ny taona vitsivitsy ho toerana fizahan-tany. Ilay firenena, fantatra amin'ny anarana hoe "lazan'i India" noho ny toerana misy azy ara-jeografika, dia afaka manao izay rehetra mpizahatany mandany andro vitsivitsy ao amin'ny faritaniny ho tia azy. ny faritra be tendrombohitra feno tanim-dite na tanàn-dehibe fanjanahantany mahavariana no sasany amin'ireo tena mahasarika azy.
Manana karazan-biby isan-karazany koa anefa ny firenena, any amin’ny valan-javaboahary misy azy, toy ny elefanta sy leoparda. Ny sary sokitra Bouddha voasokitra teo amin'ny vatolampy sy ny tora-pasika bibidia any atsimo tonga lafatra ho an'ny surf no singa sasany izay mamitaka mpizaha tany mitombo isan-taona.
1 Saingy mila Visa ve ny mpizahatany espaniola hiditra ao Sri Lanka?
2 Fomba iray ilaina hidirana ao amin'ny firenena
Saingy mila Visa ve ny mpizahatany espaniola hiditra ao Sri Lanka?
Mba hitsidika an'i Sri Lanka, na ho an'ny fizahan-tany, fandraharahana na fitaterana mankany amin'ny firenena hafa, dia ilaina ny mahazo a visa sri lanka izay ahafahanao miditra sy mandany fotoana ao amin'ny firenena ara-dalàna. olom-pirenena espaniola mila mangataka Visa alohan'ny hitsidihana an'i Sri Lanka, ankoatry ny fahafahana mampiseho fepetra hafa takian'ny firenena amin'ireo mpandeha iraisam-pirenena.
Ny visa hiditra an'i Sri Lanka, fantatra amin'ny anarana hoe ETA, dia takiana amin'ny mpandeha rehetra. Fanomezan-dàlana manan-kery ho an'ny fidirana tokana ao amin'ny firenena ary azonao atao ny mahazo izany aorian'ny famandrihana ny sidina, fa alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena. Tsy maintsy asehonao amin'ny tompon'andraikitra misahana ny fifindra-monina ihany koa fa manana porofon'ny fanohanana ara-bola amin'ny fijanonanao ao amin'ny firenena ianao, ary koa mampiseho pasipaoro manan-kery mandritra ny 6 volana farafahakeliny manomboka amin'ny fotoana hidiranao ao amin'ny firenena.
Fepetra hafa takiana amin'ireo izay miditra Sri Lanka, na noho ny fizahan-tany na noho ny antony ara-barotra, dia famandrihana sidina miverina mankany amin'ny firenena hafa na mandoa visa fandraharahana manokana raha miditra ao amin'ny firenena ianao noho ny fandraharahana, asa na fividianana sy fivarotana vokatra sy / na serivisy.
Fomba iray ilaina hidirana ao amin'ny firenena
Ireo Espaniola mikasa ny hitsidika an'i Sri Lanka dia tsy maintsy mahazo ny ETA Sri Lanka alohan'ny hidirana ao amin'ny firenena. Azonao atao ny mahazo izany amin'ny alàlan'ny fangatahana mivantana any amin'ny masoivohon'i Sri Lanka any Espaina, fa tsara kokoa ny manao izany amin'ny Internet. Ary ny firenena Aziatika izao dia mamela ny dingana hatao amin'ny Internet mba hanamora ny fidirana amin'ny fizahantany ao amin'ny firenena.
Ilaina ny manaraka ny dingana mba hamenoana ny endrika, izay mety mila torohevitra matihanina. Mikasika ny vidin'ny fahazoana ny ETA Sri Lanka, Tombanana eo amin'ny 45 euro eo ho eo izany araka ny angon-drakitra farany natolotr'i Sri Lanka, na dia mety hiovaova aza izany amin'ny fotoana hikarakaranao ny dianao. Ny vidin'ny ETA Sri Lanka noho ny antony ara-barotra dia mety hisy vidiny fanampiny raha oharina amin'ny ETA noho ny antony fizahan-tany.
Ny zavatra mahazatra amin'ity karazana dingana ity dia ny mahazo valiny ofisialy amin'ny alàlan'ny fantsom-pifandraisana sasany, toy ny mailaka. Ity mailaka ity matetika azo ao anatin'ny latsaky ny 7 andro, noho izany dia zava-dehibe ny manao izany ara-potoana alohan'ny daty hidirana ao amin'ny firenena mba hahazoana antoka fa manana izany ianao rehefa tonga ny fotoana. Soa ihany Misy masoivoho sy orinasa manolotra ny fanatanterahana izany karazana fomba fiasa izany. ny mpandeha mba tsy hanahy na inona na inona.
Raha mikasa ny hiditra ao Sri Lanka ao anatin'ny 7 andro latsaka ianao ary mila ny fanomezan-dàlana ETA maika, dia azo atao ihany koa izany fa tsy maintsy ataonao. asehoy amin'ny fangatahana fa dingana maika izany ary mety hisy vidiny fanampiny izany, satria tsy maintsy manatanteraka ny fangatahana ETA ao anatin'ny fotoana fohy kokoa noho ny mahazatra izy ireo.
Araka ny hitanao dia ilaina ho an'ny Espaniola ny mangataka Visa hiditra ao Sri Lanka na inona na inona antony handehanana, na ho an'ny fizahan-tany na raharaham-barotra. Fomba iray ilaina izay manamora ny fivezivezena ho an'ny mpizaha tany rehefa tonga eo amin'ny seranam-piaramanidina ary mamela ny firenena hanana fifehezana bebe kokoa amin'ireo izay miditra amin'ny faritaniny sy miampita ny sisin-taniny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Fitsidihana an'i Sri Lanka: mila visa ve ny mpizahatany espaniola?
Zava-dehibe tokony hatao sy hojerena amin'ny dianao mankany Punta Cana
Zavatra 3 tokony horaisinao eny na eny amin'ny dia